Ancelotti Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa, Casillas, Navas, AC Milan iyo Berlusconi
HomeWararka MaantaAncelotti Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa, Casillas, Navas, AC Milan iyo Berlusconi
Tababaraha Real Madrid ayaa ka hadlay hadal-hayn sheegaysa in kooxdiisu aanay la dhacsanayn isla markaana aan loo cusbooneysiin doonin heshiiska marka uu dhamaado wakhtigiisu.
Warar suuqa soo galey maalmihii u dambeeyey ayaa waxa ay soo bandhigayeen culays soo kordhaya oo saaran tababaraha, kadib markii ay kooxdiisu guul darro qadhaadh kala kulantay ciyaartii Barcelona.
Tababare Ancelotti oo u warramay esRadio ayaa waxa uu yidhi: “wax degdeg ahi ma jiro waayo sannad kale ayaa iiga hadhay qandaraaskayga waana la arki doonaa in la cusbooneysiiyo iyo in kale.”
“Maamulka ayaanu wada fadhiisan doonaa oo aanu ka wada hadli doonaa heshiiska cusub, walina maanu wada fadhiisan. Haddii aanay kooxdu maanta iigu yeedhin in heshiiska la cusbooneysiiyo, waxa laga yaabaa in ay September ii soo bandhigaan, ama laga yaabaa in aanay iiba soo bandhigin.” Ayuu yidhi Ancelotti oo muujiyey in aanu kalsooni badan ku qabin in heshiiska loo kordhin doono iyo in kale.
Ancelotti waxa kale oo uu ka hadlay saadaasha ciyaarta Champions League ee Arbacada 22 April ay la ciyaari doonto kooxdiisu Atletico Madrid, waxaanu tibaaxay in ay haystaan kalsooni ay ka heleen kulankii hore oo u sahli kara in ay guul gaadhaan.
Ancelitti waxa uu si adag u difaacay goolhaye Iker Casillas oo uu sheegay in taageereyaashu ku khaldan yihiin inay ku qayliyaan, waxaanu xaqiijiyey in kulanka Sabtida ee Malaga uu Casillas hoggaamin doono kooxda.
Ancelotti waxa kale oo uu tilmaamay in goolhayaha labaad ee Keylor Navas iyo Iker Casillas uu isku bedbeddeli doono oo midba ciyaar safan doono, si loo dhiso kalsoonidooda.
Ancelotti waxa uu soo bandhigay sir uu qarinayey illaa wakhtigii uu joogay AC Milan, taas oo illaa maanta cadaadiskeedu haysto, waxaanu yidhi: “Shaqadaydu way ka fududahay siday dadku u haystaan; waxa ugu adagi waa sidii kuwa aan ciyaarin aan ugu sharrixi lahaa sababta loo ciyaarsiin waayey. Markii aan Talyaniga joogay, waxay igu odhan jireen Silvio Berlusconi ayaa Email kuugu soo dira Line-up-ka, markaa xan kasta waan la qabsaday.” Ayuu yidhi.
Barcelona Oo Ciyaartoygii Labaad Iibsatay Toddobaad Gudihii
04/02/2016 Abdiwahab Ahmed